Interview with Sharan Chinam
'...श्रोतादर्शक नै सचेत हुनुपर्छ' - Sharan Chinam
शरण छिनाम, पछिल्लो चरणमा राम्रो सम्भावना लिएर देखापरेका संगीतकर्मी हुन् । पाँचथरको लिम्बामा जन्मेर सुनसरीको धरानमा संगीतको प्रारम्भिक ज्ञान लिएका छिनामले करिब पाँच वर्षअघि काठमाडौं आएर यसलाई निरन्तरता दिए । यही क्रममा उनले पहिलो एकल एल्बम बटुवा प्रकाशनमा ल्याएका थिए । त्यस एल्बमको 'बाटो हिँड्ने बटुवा' गीतले उनलाई शब्द र संगीततर्फ गत वर्षको हिट्स एफएम म्युजिक अवार्डसमेत जिताएको थियो । यस वर्ष पनि छिनामकै संगीतमा बजारमा आएको एल्बम सँगालेर आएँको काँडाबीच फूल देख्छु गीत अवार्डका लागि नोमिनेसनमा परेको थियो । तर, यस वर्षको एल्बमले भने उनलाई अवार्ड दिलाएन । यसप्रति उनको प्रतिक्रिया छ, 'हिट्स अवार्डको नोमिनेसनमा परेकैमा सन्तुष्ट छु ।''
आफ्नो एकल एल्बम 'बटुवा'को चर्चासँगै तपाइँको व्यस्तता बढेको हो ? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
'बटुवा' मेरो पहिलो एल्बम थियो । यस एल्बमको चर्चाकै कारण म संगीतकार तथा गीतकार भएको छु । वास्तवमै भन्नुपर्दा यो एल्बमले मेरो सांगीतिक बाटो खोलिदिएको हो । तर, हुनुपर्नेजति काम भने आफ्नै तर्फबाट भइरहेको छैन ।
गाउँबाट आएर यो सहरको भीडमा संगीतमार्फत आफ्नो पहिचान बनाउन पाउँदा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
यो सहर महत्त्वाकांक्षीहरूको सहर हो । सबै आआफ्नै अस्तित्वको खोजीमा छन । त्यहीँ भीडमा आफ्नो पहिचान बनाउन पाएकोमा म अत्यन्तै खुसी छु ।
गीतलाई रिमिक्स गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, यसले विकृति ल्याएको आरोप लाग्ने गरेको छ नि !
गीतको रिमिक्समात्र नभएर पाइरेसी, रोयल्टीमा ठगीजस्ता समस्या उठिरहेकै कुरा हुन् । हुन त गीतको रिमिक्स गराइले विकृति ल्याएको पनि छ नै । यस्ता समस्या समाधानका लागि कानुनी प्रावधानको कुरा पनि टड्कारो रूपमा उठेको छ । तर, कानुनी प्रावधान कसले पालना गर्ने ? समस्या समाधानको सजिलो उपाय त दर्शक/स्रोता सचेत बन्नु नै हो भने अर्कातर्फ सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहले पनि यसमा सहयोग गर्न सक्छन् । गायकगायिकाले पनि आफ्नो क्षमताप्रति विश्वास राखेर श्रोतालाई त्यहीअनुरूपको सिर्जना पस्कनुपर्छ । यी कुरा भए भने कानुनी प्रावधानको आवश्यकता पर्छजस्तो लाग्दैन ।
अहिलेसम्मको सांगीतिक यात्रामा के पाएजस्तो लाग्छ ?
सिर्जनाको खेतीमा अहिलेसम्म के पाएँ र के गुमाएँ भनेर लेखाजोखा गरेको छैन । र, लेखाजोखा गर्ने बेला पनि भएको छैन । यतिचाहिँ सगर्व भन्न सक्छु कि श्रोताको मायाका साथ नाम, इज्जत र संगीतप्रतिको दरिलो आत्मविश्वास पाएको छु ।
तपाइँ सिर्जनामा कुन पक्षलाई ध्यान दिनुहुन्छ ?
म आफू बाँचेको परिवेशअनुकूल गीत/संगीत सिर्जना गर्छु । म पनि एक आम नेपालीजस्तै भएकाले मैले मेरा हरेक सिर्जनामा नेपाली माटोको सुुगन्ध दिने प्रयास गर्छु ।
गीतमा संगीत भरेपछि तपाइँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ ?
गीत सुन्नमा जति कर्णपि्रय हुन्छ यसको सिर्जनात्मक पक्ष त्यति नै जिम्मेवार र संवेदनशील छ । तर, यसो भन्दैमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छन खोजेको भने पक्कै होइन । मेरा सिर्जनाहरू आत्मिक अभिव्यक्ति हुने भएकाले म आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट छु ।
संगीत गरेर जीवन धान्न सकिन्छ त !
नेपाली संगीत बजार 'संगीत उद्योग'का रूपमा व्यावसायीकरण भइसकेको छ । तर, यसो भन्दैमा सबैले सहजतापूर्वक बाँच्ने वातावरण बनिसकेको छ भन्ने होइन ।
तपाइँका योजनाचाहिँ के छ ?
मैले स्पष्ट योजना बनाएको छैन । अर्कातर्फ भविष्य हेरेर केही भन्न पनि सकिन्न । यद्यपि, आफ्नो तर्फबाट गीत/संगीत सिर्जनालाई निरन्तरता दिने हो ।
अन्त्यमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
नेपाली गीत/संगीत हाम्रो मौलिक सम्पत्ति हुन्, यसैमा हाम्रो अस्तित्व छ । यसलाई जर्गेना गर्नु हाम्रो साझा कर्तव्य र दायित्व पनि हो । त्यसैले यस्ता सिर्जनालाई माया गरेर सुनिदिनुहोला ।
अन्तरवार्ताकार: सचित राई बगैंचा डटकम्
Views : 1977 | Date : 2010-02-01